﻿	လိင်မှတဆင့် ပျံ့နှံ့ကူးစက်မှုများနှင့် ရောဂါများဆိုတာဘာလဲ။ | Find My Method
လိင်မှတဆင့် ပျံ့နှံ့ကူးစက်မှုများနှင့် ရောဂါများဆိုတာဘာလဲ။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ » ဘေးကင်းလုံခြုံမှု » လိင်မှတဆင့် ပျံ့နှံ့ကူးစက်မှုများနှင့် ရောဂါများဆိုတာဘာလဲ။
လိင်မှတဆင့် ပျံ့နှံ့ကူးစက်မှုများ (STI များ) နှ၍့်ရောဂါများ (STD များ) ဆိုသည်မှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမှတဆင့် အများဆုံး ပျံ့နှံ့သော ရောဂါများ/ကူးစက်မှုများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ယောနိ၊ ပါးစပ်နှင့် စအိုတို့မှတဆင့်လည်း လက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်သည်။ တခါတရံတွင် STI များနှင့် STD များကို သွေးမှတဆင့် သို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် သို့မဟုတ် မွေးဖွားချိန်တွင် မိခင်မှတဆင့် ကူးစက်စေနိုင်သည်။ ဆစ်ဖလစ်၊ HIV၊ ဂနိုရီးယား၊ လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ဗိုင်းရပ်စ် (HPV)၊ ရေယုန်၊ အသည်းရောင်အသားဝါ B နှင့် ကလာမိုင်းဒီးယားရောဂါတို့သည် ဤနည်းလမ်းအတိုင်း ကူးစက်နိုင်သည် ။
STI နှင့် STD ဝေါဟာရများမှာ ဆင်တူပြီး တစ်မျိုးတည်းကဲ့သို့ပင် အသုံးပြုလေ့ရှိသော်လည်း အမှန်တကယ်အားဖြင့် မတူညီကြပေ။ STI သည် ရောဂါဖြစ်သည့် အဆင့်သို့ မရောက်ရှိသေးသည့် ကူးစက်မှုဖြစ်ပြီး ဘက်တီးရီးယားများနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်များ သို့မဟုတ် ဥပမာအားဖြင့် ဆီးခုံသန်းများကဲ့သို့ ကပ်ပါးပိုးများပါဝင်သည်။
STD သည် STI ၏ အကျိုးဆက်ဖြစ်ပြီး ပိုမိုဆိုးရွားသည်။ ဖြစ်ပွားပုံမှာ STD များသည် ကူးစက်မှုများကို စတင်စေ၍ ပက်သိုဂျင်များက ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီး အရေအတွက်စတင်ပွားများလာကာ ခန္ဓာကိုယ်၏ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကမောက်ကမဖြစ်စေပြီး STD များ ဖြစ်လာသည်။ STI များအားလုံးသည် STD များဖြစ်လာခြင်းမရှိဘဲ ၎င်းတို့သည် တခါတရံတွင် အဓိကပြဿနာများဖြစ်ပွားစေခြင်းမရှိဘဲ အလိုအလျောက် ဖြေရှင်းတတ်ကြသည် ။
“လိင်မှတဆင့် ပျံ့နှံ့တတ်သော ကူးစက်မှုများ။” WHO , www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis) . ဒီဇင်ဘာလ 2020 တွင် ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့်ပေးထားသည်။
“STI နှင့် STD- ကောလိပ်ကျောင်းသားများအတွက် အဓိက ကွဲပြားချက်များနှင့် အရင်းအမြစ်များ” Tulane University , publichealth.tulane.edu/blog/sti-vs-std/ . ဒီဇင်ဘာလ 2020 တွင် ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့်ပေးထားသည်။